» Culumada Al-Ictisaam oo Soo Saaray Bayaan Ka Dhan ah Kooxda Al-Shabaab +SAWIRO
Culumada Al-Ictisaam oo Soo Saaray Bayaan Ka Dhan ah Kooxda Al-Shabaab +SAWIRO
Feb 20, 2013 - 1 Jawaab	Aqrisatay:2271Jamaacadda Al-Ictisaam oo katirsanaa Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax oo Maalintiio Jimcihii Kooxo Diinta ka been sheegay ku dileen Magaalada Garawe Masjid ku yaala ayaa kulan Maalmihii ugu dambereyay ee ku lahaayeen Magaalada Garawe waxa ee kasoo saareen Bayaan dhoor Qodob ka kooban.
Bayaanka ayaana u qornaa sida Tan:
1- Waxaan u mahad celinaynaa allaah Subaahanahu Watacaa oo fududeeyey hawlo baddan oo ka mid ah aaskii Sheikha iyo qabqabashadii Danbiilayaasha. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa Dowladda Puntland, sida wayn ay howshaan isugu xilqaantay waxna uga qabatay. Sidoo kale waxaan u mahadd celinaynaa dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland kaalinta ay ka qaateen wax ka qabashada dhacddadaan iyo cidkasta oo gacan ka gaysatay.
2- Waxaan u cadaynnaynaa Muslimiinta, gaar ahaan Shacabka Soomaaliyeed in kooxda Al-Shabaab ee dishay Sh. Cabdulqaadir ay tahay koox burcad ah, diinta Islaamkana aan wax shaqo ah ku lahayn, ayna tahay musiibo iyo cadow aan ummadda u reebayn, Diin, Naf, Maal, caqli iyo sharaf middna. Waxaana arintaas cadaynaya shirqoolka hal doorka ummadda, sida; Culimmada, Aqoonyahanka, Salaadiinta, Siyaasiyiinta, Saraakiisha, Ardayda, iyo Ganacsatada. Sidoo kale Qarxinta, Xasuuqa, qaxinta, cabsigalinta, niyad jabinta iyo dullaynta ummadda Soomaaliyeed.
3- Waxaan u cadaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan illaahay iyo Rasuulku farin in dadka Muslimiinta ah lagaalaysiiyo ama la laayo, shareecada Islaamkuna aysan
qabin, kooxda Al-shabaabna ay illaahay iyo Nabiga ku been abuuranayaan.
4- Hadaba waxaa waajib ku ah ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan sida; Maamulada, Qabiilooyinka, iyo bulshada oo dhan inay si wada jir ah uga hortagaan kooxda Al- Shabaab ee dabargoynaysa Ummadda , maadaama ay yihiin khatar ku wajahan ummadda idilkeed.
5- Waxaan Shacabka u cadaynaynaa in kooxaha shirqoolada iyo qaraxyada fulinya aysan matalin qabiilooyinka ay ka dhasheen , lagalana tashan, dadka ay bartilmaameed sanayaana aysan u dilayn qabiil ahaan, aysana jirin qabiil loogu danaynayo falalakan guracan ee ay ku kacayaan. Sidaa daraadeed;
b) Sharci ahaan looma aanayn karo beelaha ay ka soo jeedaan,
t) Mana banaana in dadka falalkaas fulinaya, lagu kaalmeeyo falkooda qaldan, lamagan galiyo, ama gabaad loo noqdo.
j) Marka laqabto danbiilayaashana looma gurmankaro. Looma doodi karo, lamana difaaci karo.
x) Waxaan u cadaynaynaa cidii sidaa yeesha lacnada illaahay inay mutaysanayaan.
6- Waxaan usoo jeedinaynaa beelaha Soomaaliyeed inay ka digtonaadaan utunta, iska horkeena iyo colaada ay ka dhex abuurayso koox Al-Shabaab. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa inaan dheg loo dhigin dicaayadaha marin habaabinta ah ee kooxdaasi u adeegsadato weecinta iyo daboolista faldanbiyoodkooda.
7- Waxaan cadaynaynaa in kooxdii faldanbiyeed isu kaashata ama wada fulisa sharci ahaan isku xukun yihiin. Sida; kan amray, kan dilay, kan lacagta baxshay, kan soo
ilaaleeyey, kan gaariga ama guriga u kireeyey, kan qariyey, iyo kan raacdo reebka ah.
8- Waxaan usoo jeedinaynaa dhamaan Maamulada Dalka inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka, cidkasta oo faldanbiyeed gaysatana lagu qaado xukunka Shareecada islaamku ka qabto arinkaas.
9- Waxaan marlabaad usoo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed maamul iyo shacaba in la isugu yimaado shir wayne heer qaran ah oo looga arinsanayo dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay ummadda ku hayso.
10- Ugu danbayntii waxaan u dardaarmaynaa ummadda Soomaaliyeed illaahay cabsidiisa iyo inay ku dhaganaadaan Diintooda, caqiidada saxanna ka qaataan culimmadda, si ay uga badbaadaan marin habaabinta kooxda Al- Shabaab wado.
One Response to Culumada Al-Ictisaam oo Soo Saaray Bayaan Ka Dhan ah Kooxda Al-Shabaab +SAWIRO
Siilkii Hooyadaa says:	February 20, 2013 at 10:07	Shabakadiinu waxay ka shaqeesaa Beenta